Ny Nokia 2 dia manomboka amin'ny fomba ofisialy amin'ny fizakantenany 2 andro | Androidsis
Ny Nokia 2 dia manomboka amin'ny fomba ofisialy amin'ny fizakantenany 2 andro
Elvis bucatariu | | About us
Ny Nokia 2, finday iray izay naseho vao tsy ela akory izay, dia natomboka tamin'ny famaritana avo lenta ihany koa tamin'ny farany, nefa koa amin'ny vidiny mirary.
Ny HMD Global dia manohy manitatra ny portfolio-n'ny telefaona Nokia azy, rehefa nandray ny faran'ny marika izy mba hamerenany izany amin'ny tsenan'ny smartphone.
Taorian'ny fanombohana voalohany ireo modely Nokia 3, Nokia 5 sy Nokia 6, tonga ireo modely taoriana kelin'izay Nokia 8 y Nokia 7, smartphone finday antonony miaraka amina specs tsara be.
Ankehitriny, maniry ihany koa ny orinasa mikarakara ny sehatra ambany na fidirana amin'ny alàlan'ny fanombohana ny Nokia 2, finday avo lenta mora vidy fa tsara dinihina ny vidiny kely.
1 Nokia 2 famaritana
Nokia 2 famaritana
Ny fahaleovantenan'ny Nokia 2 angamba no tanjony matanjaka. Araka ny HMD Global, ny fitaovana dia haharitra hatramin'ny roa andro tsy misy olana amin'ny fiampangana tokana. Raisina an-tsaina fa ny fahaizan'ny bateria dia 4.100mAh, avo lenta ny vintana fa ny fizakantena nampanantenain'ny HMD dia marina.
Ny famaritana hafa momba ny Nokia 2 dia misy ny Snapdragon 212 processeur. Raha ny marina dia izy no finday avo lenta Android voalohany nampiasana ity sehatra fanodinana ity. Ny puce dia miorina manodidina ny fizotry ny famokarana 28nm ary tonga miaraka amin'ny Quad Core Cortex A7 1.3 GHz.
Manolotra ny Nokia 2 RAM 1 GB, habaka anatiny 8 GB ary namboarina tamin'ny sombin-aliminioma tokana. Etsy ankilany, ny azy 5 santimetatra ny efijery ary manana 720p vahaolana. Nilaza ny HMD Global fa ny efijery an'ity terminal ity dia iray amin'ireo tsara indrindra hita amin'ity sokajy ity.
Farany, Tonga ny Nokia 2 miaraka amin'ny rafitra fiasa Android Nougat 7.1.2, tsy misy bloatware, ary ny smartphone dia havaozina amin'ny Android 8.0 Oreo ihany koa atsy ho atsy.
Tonga ny Nokia 2 miaraka a vidiny manodidina ny 99 euro Ary matoky izahay fa hivarotra mahagaga any amin'ny firenena izay malaza indrindra ny finday avo lenta sy ambany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny Nokia 2 dia manomboka amin'ny fomba ofisialy amin'ny fizakantenany 2 andro
Acer Felix dia hoy izy:
Ho tonga any Mexico ve izy ???
Hanao ahoana ny vidiny ??
Valiny tamin'i Acer Felix
Ity no finday avo lenta 5G voalohany manerantany
Ny LG G6 dia hanavao ny Android Oreo tsy ho ela